Ny Safari Tsara Safariana any Tanzania
Afrika & Afovoany Atsinanana Tanzania
Azo heverina fa ny toerana tsara indrindra amin'ny safari any amin'ny kaontinanta Afrikana, Tanzania dia trano fonenana an'arivony manerantany fanta-daza - anisan'izany ny Serengeti National Park sy ny faritra Ngorongoro Conservation. Amin'ny ankapobeny dia fantatry ny Great Migration , hetsika isan-taona izay mahita andiam-bibidia goavam-be sy zebra mandeha eo anelanelan'ny tanimbolin'ny tany am-bavony sy ny fonenany ao Tanzania sy Kenya.
Noho izany, safariana Tanzaniana dia miorina tsara amin'ny lisitry ny sambon'ny mpandeha maro. Betsaka ny mpandraharaha misafidy, ary miely be dia be ny dia. Alohan'ny handoavana dolara an'arivony amin'ny dianao mandritra ny androm-piainany, dia ilaina ny mahazo antoka fa hahazo ny lanjanao ianao. Ireto misy sasantsasany amin'ireo lalana tsara indrindra hodinihina.
Ho an'ireo mpivarotra Luxury: Deluxe Safari & Beach, Alao sary Afrika
Ity lalana 11 alina ity avy amin'ny orinasa Travel Imagine Travel dia safidy tsara ho an'ireo izay manana vola tsy misy fandaniana. Izy io dia manolotra ny tsara indrindra amin'ireo tontolon'ny zava-manan'aina roa - ny hatsaran-tarehin'ny tarana-tany tsara indrindra any Tanzania, ary ny lozam-pokonolona tropikaly. Ny trano fonenana dia ahitana andianà tobim-pamokarana manokana sy trano fialofana, izay tompon'antoka amin'ny marika ara-tsosialy sy ara-tsosialy Asilia Africa.
Rehefa avy manidina any Kilimanjaro ianao dia hiarahaba ny mpitari-dalana anao manokana ary mandray mivantana any amin'ny valan-pirenena Tarangire. Ny ampahany amin'ny renivohitra avaratry ny firenena, ny Tarangir dia tsy dia feno loatra noho ny mpifanolo-bodirindrina fanta-daza kokoa, izay manolotra fandaharana mijery lalao tsara sy fahatsapana ho tsy afa-manoatra. Handany ny fotoananao ianao any amin'ny toby Oliver, izay misy tranokely safari-tseky folo manome ny fampiononana maoderina rehetra, amin'ny alàlan'ny fananganana antik ny trano fandroana amin'ny rano mafana sy ny lavarangana.
Ny lalana dia mitondra anao any amin'ny Farihim-Pirenena Manyara, ny faritry ny fiarovana ny Ngorongoro ary ny Serengeti National Park. Ny trano fandraisam-bahiny ao Ngorongoro dia tena manokana, izay ahitana ny tranom-bolo-n'ireo haitao sy ny lanjan'ny Highlands. Ity tobim-pahasalamana ity dia miorina eo amin'ny tehezan-kavoan'ny volkano Olmoti ary ahitana fomba fijery mahavariana momba ny Critter Ngorongoro miaraka amin'ny sakafo an-trano ambony. Ao amin'ny Serengeti, azonao atao ny manatsara ny dianao miaraka amin'ny safari-balafomanga mafanafana - ny traikefa faran'izay tsara indrindra.
Ny tapany faharoa amin'ilay dia dia nandany tao amin'ny Arkitosan'i Zanzibar , ao amin'ny Matemwe Lodge 5-kintana. Miandrasa ny famindram-po miverina any amin'ny iray amin'ireo sambo mpifanolobodirindrina 12, izay samy mandao ny valan-javamaniry feno haran-dranomasina. Ny trano rehetra dia ahitana dobo fanangonana lalina ary sehatra tsy miankina iray miaraka amin'ny fahitana ranomasina mampitony. Mandany ny andro iainanao ao amin'ny spa, mandroso amin'ny dhow nentim-paharazana na ny fiankinan-doha amin'ny manodidina an'i Mnemba Atoll.
Ho an'ny Fianakaviana: Safarian'ny Safodrano sy Wildlife Wildlife, Company African Adventure
Ny safarisan'ny fianakaviana dia manolotra fahafahana manokana hampidirana ny zanakao amin'ireo zava-mahagagan'ny Afrikana Afrikana - saingy mila planina manokana izy ireo. Fialantsasatra maro no manana fepetra amin'ny taona, ary ny sasany dia mandrara ny ankizy amin'ny lalao manontolo. Ity dia nosoratan'i The Africa Adventure Company, izay, manokana, mifantoka manokana amin'ny ray aman-dreny mitety zatovo sy zatovo. Ny fitsangatsanganana manokana dia ahafahanao manamboatra ny arahinao araka ny fepetra manokana sy ny tombontsoan'ny tsirairay, raha toa kosa ka ny asa atao dia ilaina mba hankafizan'ny tanora mpandeha lavitra.
Mandalo 14 andro ny dia, ary mifantoka amin'ny avaratra. Ao amin'ny Palais des Nations Tarangire, dia azo atao ny mankafy ny lalao fampisehoana miaraka amin'ny foko Maasai na ny fitsidihana any an-tsekoly any ambanivohitra. Ny fanandramana tahaka izao dia manolotra ny fomba fijerinao amin'ny kolontsaina hafa ny zanakao ary koa ny fahafahana mifandray amin'ny Tanzania amin'ny vanim-potoany. Amin'ny Farihin'i Eyasi, mandany fotoana miaraka amin'ireo ombidia indizeny, mianatra ny fomba hanangonana zavamaniry sy hanamboatra fitaovam-piadiana sy firavaka nentim-paharazana.
Ny fisehoana an-tsoratra hafa dia ahitana ny fijerena lalao tsy manam-paharoa ny Critter Ngorongoro sy ny Serengeti; ary Olduvai Gorge , tranonkala anthropologia malaza amin'ny fôsily manomboka eo amin'ny olombelona. Any amin'ny toerana tsirairay, trano fonenana sy toby no nofidiana manokana, indrindra ho an'ny fijerin'ny fianakaviany. Ny safidy sarobidy sy sokajy Classic dia mamela anao hanamboatra ny dianao araka ny teti-bola. Na inona na inona vidin'ny poti-safidyo, dia misy fihenam-bidy manan-danja ho an'ny ankizy - mahatonga ny fiheverana ny fametrahana famatsiam-bola ho an'ny fialantsasatry ny fianakaviana any Tanzania kely tsy dia atahorana loatra.
Ho an'ny mpifankatia: Romantic East Africa Safari, & Beyond
Serengeti Hot-Air Serengeti. Diana Robinson Photography / Getty Images
Ity fiainana an-dàlana ity dia nofinidin'ny orinasan-tsarimihetsika Travel & Beyond dia natao ho an'ny mpivady mariazy. Azonao atao koa ny mametraka ny sehatra amin'ny soso-kevitra nofinofisinao , na manao tsingerin-taona manokana tsy hay hadinoina. Ny fitsangatsanganana tsy miankina, izay maharitra 11 andro, dia manomboka amin'ny fiaramanidina voaloton'ny Kilimanjaro mankany lavitra lavitra Manyara Airstrip. Avy eo dia mitondra fiara 4x4 misokatra ho anao any amin'ny Farihim-Pirenena any Manyara National Park, toerana ahitana toerana mahasalama mampiavaka azy ireo avy any amin'ny ala mikitroka ho any amin'ny farihy soda voapoizina amin'ny flamingoes.
Mandany ny fotoanao any amin'ny valan-javaboary mitady ireo liona miakatra eny ambony hazo. Tato aoriana dia resin-tory teo amin'ny hazo mahazatra tao amin'ny trano fisakafoanana aty ambanin'ny atmosfera ao Beara Lake Manyara Tree Lodge. Ny traikefa tokana dia ny marika amin'io lalana io. Ao amin'ny faritry ny Conservation Ngorongoro, mizarà pikilika amin'ny gourmène miaraka amin'ny olon-tianao ao amin'ny rihana crater, voahodidin'ny zavamiaina ary miandry amin'ny mpanamboatra tsifotra. Ao amin'ny Serengeti, mijanòna eo ambanin'ny lamba firakotra ary hiaina ny romotra mampientanentana amin'ny safari-pofona mafana avy amin'ny rivotra mafana.
Mazava ho azy, ny fialantsasatra am-pitiavana dia tokony hampidirina farafaharatsiny andro vitsy monja amin'ny sisin-tany iray idillika - izay misy ny trano sy ny alan'i Mnemba Island. Miditra amin'ny fiaramanidina sy sambo mankany amin'io sary io-toerana tsara toerana ao amin'ny zaridainan'i Zanzibar hanandrana ny tananao amin'ny fanatobiana scuba, snorkeling na fisamboaran-jono. Azonao atao ihany koa ny miala sasatra eny amoron-dranomasinao, na manentana ny masajy ho an'ny ranomasina. Ny ankamaroan'ny sakafo dia servisy al fresco, amin'ny endriky ny pikantsary amin'ny torapasika na fandrehetana labozia eo amin'ny sisin'ny rano.
Ho an'ny mpikaroka: Get Out of Town, Nomad Tanzania
Vao navotsotra tamin'ny volana Jolay 2017, io lalana io avy amin'ny orinasan-tserasera Travel Nomad Tanzania no lohateninao handositra ny hazakazaka rat. Natao ho fanoherana ny faneren'ny fiainana maoderina izy io, mifantoka amin'ny faritra roa lavitra any atsimon'i Tanzania, samy lavitra lavitra noho ny WiFi sy ny fidirana an-tariby. Manaova veloma ny mpiara-miasa aminao, manoratra avy amin'ny media sosialy ary mamantatra ny fiadananao anaty amin'ny fitsidihana ny tany faran'izay kely indrindra nitsidika ny firenena.
Ny fitsidihanao fito alina dia manomboka ao amin'ny valan-javaboahary Ruaha. Io no valam-pirenena lehibe indrindra any Tanzania, ary iray amin'ireo ambany kely ihany koa. Ny fandehanana lavitra dia midika fa tsy dia feno loatra ny valan-java-malaza any Avaratra; raha mahita valisoa be dia be ny fahitan'ny biby an'habakabaka. Amin'ny ankapobeny, ny zaridaina dia fantatra amin'ny saka lehibe, mirehareha amin'ny liona faharoa lehibe indrindra any Afrika. Hijanona ao amin'ny tobin'i Kigelia Ruaha Nomad Tanzania ianao, izay misy tranokely enina enina ambolobe ao anaty alondrano hazo.
Ny ampahatelon'ny làlan-dàlana dia mitondra anao any amin'ny tranokalan'ny Selous Game Reserve malaza eran-tany. Ny trano fialofana ao amin'ny tobin'i Sand Rivers Selous dia manome fomba fijery manintona ny reniranon'i Rufiji, izay manome fahafahana tsara ny safarisà renirano miala sasatra. Ny fomba tsara indrindra hijerena io faritra tsy misy faritra io, na izany aza, dia an-tongotra. Ny fiakarana safaris dia fanintonana lehibe ao Sand Rivers Selous, izay manome anao ny fahafahana hiditra ao amin'ny famirapiratan'ny natiora.
Ho an'ny tena zava-tsarobidin'ny fiainana any an-tany efitra, mandany toerana fitobiana alina ao amin'ny toby vonjimaika. Voahodidina kirihitra virjiny izy io ary voan'ny lozam-pifamoivoizana teo akaiky teo. Ireo tranolay misy kodiarana ireo dia afaka mijery ny kintana, izay miresaka amin'ny kintana mahavariana manerana ny lanitra afrikana. Ity fizarana ity dia natolotra nanomboka ny volana Jona ka hatramin'ny tapaky ny volana marsa.
Ho an'ny mpaka sary: ​​Tanzania Migration Foto Safari, Advent Nature Habitat
Ny Fifindra-monina Lehibe. Paul & Paveena Mckenzie / Getty Images
Na mpilalao am-pirahalahiana ianao na mpilalao matihanina ao ambadiky ny family, ity dia tsy maintsy atao ho an'ny mpaka sary an-tsokosoko. Izy io dia mifantoka manodidina ny Fifindra-monina Lehibe, hetsika mahafinaritra sy mahafaty an'arivony an'arivony sy zebra an'arivony (sy ireo biby mpiremby izay manaraka azy ireo). Ny fotoana sy ny toerana misy ny fifindra-monina dia miova isan-taona, ary sarotra ny maminavina izany. Noho izany antony izany, ny fitsangatsanganana dia mavitrika, amin'ny fampiasana toby finday mba hametrahana anao ao am-pon'ilay hetsika.
Hiorina ao amin'ny Namiri Plains ianao, fidirana an-tsokosoko manokana ao amin'ny Serengeti izay vao haingana no tonga mpitsidika. Vitsy ny mpizahatany mandeha any amin'ny lemak'i Plains - izany hoe tsy mila manahy momba ny sambo fiara safari manimba ny maha-marina ny sarinao. Ny faritra dia fantatra ihany koa amin'ny haavon-drivotra avo lenta, manome anao ny fahafahana mety indrindra amin'ny famoahana ny horonan-tsary mamono amin'ny fakantsary. Azonao atao ny mijery an-tongotra, na amin'ny fiara safari nentim-paharazana.
Ireo Habibiana Habita voajanahary dia mametra ny haben'ny vondrona ho an'ity lalana ity mankany amin'ny olona sivy, miaraka amin'ny vahiny efatra fara fahakeliny. Midika izany fa misy toerana malalaka ao amin'ny jeep noho ny fitaovana fakantsarinao, raha toa ka misy seza varavarankely miaraka amin'ny fomba tsy ampoizina dia azo antoka. Ny saran-dalan'ny fitsangatsanganana dia ahitana ny sidina amin'ny Serengeti avy ao Arusha, miaraka amin'ny famindrana entana fanampiny izay tonga ho fitahiana ho an'ireo manana lantihy maro, satroka ary kitapo fakantsary.
Ny tsara indrindra, ny fitsidihana sivy andro dia tarihin'ny mpaka sary matihanina sy mpanafatra matihanina, miaraka amin'ny fahalalana ilaina mba hanoro anao ny fomba hahazoana ny tsara indrindra .
Torolalana ho an'ny Travel Tanzania: Facts manan-danja sy fampahalalana
Inona no tokony ho fantatra alohan'ny handehananao any Tanzania?
Dublin City - Fampidirana
Ny balsa bash Massachusetts dia riandrano roa ho an'ny vidin'ny iray
Fiarandalamby goavana ho an'ny besinimaro any Amerika Atsimo
Ny toerana tsara indrindra 8 Costa Costa Rica ho an'ny fianakaviana
Inona ny Rio Grande Rift?
Fandaniam-potoana sarobidy indrindra any Washington, DC
Mampiseho ny tsara indrindra i Macau
Six Great Jerusalem Bars
Afaka manamboatra divay ve aho ary alefa alefany any Pennsylvanie?
Mitranga ve ny hotely Skirvin?
Fomba hahitana trano fialan-tsasatra amin'ny trano fialan-tsasatra any an-tanàna na eny amin'ny Beach
Ny tsara indrindra any Cajun any Louisiana miaraka amin'ny ankizy
Ny fitsidihana an'i Bahía Urbana any San Juan